Uyabona Okulandwa yiGoogle? | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 23, 2012 Douglas Karr
IGooglebot iyi-bot ekhasa iwebhu yakwaGoogle (kwesinye isikhathi ibizwa nangokuthi “isicabucabu”). Ukukhasa inqubo lapho iGooglebot ithola khona amakhasi amasha futhi avuselelwe ukwengezwa enkombeni yeGoogle. Sisebenzisa isethi enkulu yamakhompyutha ukulanda (noma “ukukhasa”) izigidigidi zamakhasi kuwebhu. IGooglebot isebenzisa inqubo ye-algorithmic: izinhlelo zamakhompiyutha zinquma ukuthi yimaphi amasayithi okufanele akhase, kaningi kangakanani, nokuthi mangaki amakhasi azolandwa esizeni ngasinye. Kusuka kwa-Google: GoogleBot
I-Google ilanda, ikhasa futhi ithwebula okuqukethwe kwekhasi lakho okuhlukile kusiphequluli. Ngenkathi iGoogle ingakwazi khaya ukubhala, kuyasebenza hhayi kusho ukuthi lizohlala liphumelela njalo. Futhi ngoba uvivinya ukuqondisa kabusha kusiphequluli sakho futhi kuyasebenza, akusho ukuthi iGooglebot iqondisa kabusha kahle leyo traffic. Kuthathe inkhulumomphendvulwano phakathi kweqembu lethu nenkampani eyayibamba ngaphambi kokuthi sithole ukuthi benzani… futhi ukhiye wokuthola ukuthi ukusebenzisa i Fetha njenge-Google ithuluzi kuma-Webmasters.
Ithuluzi le-Fetch as Google likuvumela ukuthi ufake indlela ngaphakathi kwesayithi lakho, ubone ukuthi i-Google ikwazile yini ukuyikhasa noma cha, futhi empeleni ubone okuqukethwe okukhasiwe njengoba kwenza i-Google. Kwiklayenti lethu lokuqala, sikwazile ukukhombisa ukuthi iGoogle ibingasifundi iskripthi njengoba bebengathemba. Eklayentini lethu lesibili, sikwazile ukusebenzisa indlela ehlukile yokuqondisa kabusha iGooglebot.
Uma ubona Iziphambeko zokukhwabanisa ngaphakathi kwe-Webmasters (esigabeni sezeMpilo), sebenzisa i-Fetch njenge-Google ukuhlola ukuqondisa kabusha kwakho futhi ubuke okuqukethwe okutholwa yi-Google.
Tags: landa njengegooglebotgooglebotisikhunta